Ukwenza uHulumeni waseKhaya uphendule ngezenzo zawo | Local Government Action
Qinisekisa ukuthi ikhansela lakho liyasebenza
Zibandakanye futhi ungapheli amandla
Ukuvota kukhetho lukahulumeni wasekhaya kusayisinyathelo sokuqala sokuqinisekia ukuthi kuba nohulumeni wasekhaya onenhliziyo yabantu ohambisa izidingo ezidingwa umphakathi wakho. Inqubo enzima neqhubekayo eyokuqinisekisa ukuthi labo abavotelwayo benza lokho abakwethembisile.
Qapha ukuthi ikhansela lakho lisebenza kanjani
INingizimu Afrika ayinayo indlela yokwehlisa umuntu esikhundleni esemthethweni. Kwamanye amazwe, ungakwazi ukususa ikhansela esigqikini kalula nje ngokuthi kube nabantu abacikice emaphepheni kwaze kwafinyelela esibalweni esidingekayo sabavotayo sokususa umuntu esihlalweni. Njengoba lokhu kungenzeki eNingizimu Afrika, akusho ukuthi awunawo amandla okuthathela amakhansela izinyathelo nokuqinisekisa ukuthi afeza izethembiso zokhetho.
Enza uphenyo ngalokhu okulandelayo:
Ngabe ikhansela lakho lizimisele ngokubhala phansi izethembiso?
Ngabe ikhansela lakho aliphumeli obala ngokuthi izinto zizolethwa nini, noma ngabe liyazibophezela ukuhambiseni izinto ezithile ngezinsuku ezithile ezibekiwe?
Ngabe ikhansela lakho selifezile okubalulekile enikufunayo? Uma kungenjalo, ngabe liyakwazi ukuveza izizathu ezizwakalayo zokuthi kungani kungenjalo?
Ngabe ikhansela lakho liyaxoxisana nomphakathi wenu ukuze libone izinto ezinikhathazayo
Ngabe ikhansela lakho liyakudlulisela kumasipala nakubasebenzi lokho umphakathi okhala ngakho, izinkinga nezinqumo?
Ngabe ikhansela lakho livame ukwazisa umphakathi ngesimo senqubo kamasipala, okubandakanya nezezimali?
Khumbula: uma ikhansela lingalethi izidingo, ningaphoqelela nikhankasele ukuthi lisule esikhundleni. Ukushiya esikhundleni kwekhansela lewadi kuzoholela okhethweni lokuchibiyela oluzokunikeza elinye ithuba lokuqinisekisa ukuthi abamele ukuvotelwa bazolalelisisa izimfuno zenu. Isikhala sekhansela elisebenza ngokungagcwele elikhethwe iqembu sivele sivalwe ngokusebenzisa uhlu lweqembu. Uma kwenzeke lokho, kumele uphoqelele ukuthi iqembu lixoxisane nomphakathi ngaphambi kokuqoka elinye ikhansela.
Zijwayeze ukuhamba imihlangano yomkhandlu
Abantu banelungelo lokuhamba iningi lemihlangano yomkhandlu. Sebenzisa lokhu ukuze uqinisekise ukuthi ikhansela lisebenza ngendlela evulelekile. Umasipala nekomidi lawo kufanele bavulele umphakathi emihlanganweni yawo uma bedingida izindaba eziphathelene nokulandelayo:
izivumelwano zokuhanjiswa kwezidingo
noma okuphi umthethodolobha
noma okuphi ukuchibiyela kuHlelo lweNtuthuko eDidiyelwe
uhlelo lokulawula ukusebenza noma ukuchitshiyelwa kwalo. (isigaba 160 (4) soMthethosisekelo; isigaba 19 soMthetho weziNhlaka zoMasipala)
Umphathi kamasipala kumele azise umphakathi ngesikhathi, usuku nendawo njalo uma kuzoba nomhlangano ojwayelekile kanjalo nanemihlangano yomkhandlu yekhethelo noma ephuthumayo. Ngaphandle uma udaba oluzodingidwa luphuthuma ngalendlela yokuthi ngeke bakwazi ukwazisa umphakathi. Umkhandlu ungabamba umhlangano ongavulelekile kwezinye izikhathi uma kunezizathu ezizwakalo zokwenza njalo. Umhlangano ungaba ngongavulelekile uma kunokubhaliwe kwimithethodolobha okusho njalo.
Yize noma amakomidi omkhandlu kufanele avuleleke, awukho umthetho ophoqa ukuthi umphakathi waziswe ngemihlangano yekomidi. Lokhu kwenza kube nzima ukuzibandakanya. Xhumana nekhansela lakho noma usihlalo wekomidi (noma inhloko yekomidi) ukuze uthole ukuthi imihlangano ephathelene nokuthinta wena izoba kuphi nini. Batshele ukuthi udinga usizo olunjengolwezokuthutha, ukunakekelwa kwabantwana, noma ukutolikelwa ukuze uzibandakanye.
Inkohlakalo kuhulumeni wasekhaya
Ngowezi-2011 isiKhungo seNtandoyeningi e-Afrika (Idasa) senza ucwaningo ngokwaneliseka kwezakhamuzi ezingabantu abakhulile abayizakhamuzi baseNingizimu Afrika komasipala abangama-21 eMpumalanga, eLimpopo, KwaZulu-Natali nase-North West. Umbiko waveza ukuthi abantu abaningi babengathokozile ngamakhansela abo – “ama-66% ababambiqhaza bacabanga ukuthi abasebenzi bahulumeni namakhansela bayahlomula ngasese ngendlela yokungathembeki behlomula kwizinsiza ezibekelwe ukuhambisa izidingo kubantu...”
(Umthombo: Idasa, The State of Local Governance from a Citizen Perspective,2011, ikhasi. 32)
Ukwenza uHulumeni waseKhaya uphendule ngezenzo zawo